IoT Botnets - Toromarika avy amin'ny Semalt amin'ny fomba hiarovana ny solosaina
Azo antoka fa Zeus, Tigerbot, ary Droid Dream no ohatra tsara indrindra amin'ny botnets mobile izay manao ny asany ary manimba ny sehatra hafa isan'andro. Na izany aza, ny fisehoan-javatra Io Io dia nanjary zava-niseho tany amin'ny sahan'ny botnet, izay niantraika tamin'ny fitaovana maro samihafa eran-tany. Ny fiarovana ny Internet amin'ny zavatra (IoT) no iray amin'ireo olana lehibe indrindra amin'izao fotoana izao. Ny fivoaran'ny bot'etso IoT dia ny raharaha mahamay amin'ny cybersecurity amin'izao fotoana izao. Botnet hafa iray hafa tokony holazaintsika dia ny Mirai botnet izay nanangana fanafihana samihafa DDoS. Nisy fiantraikany tamin'ny fitaovana teknika sy tsy teknika. Ny fitaovana IoT dia ampiasaina betsaka ho an'ny tetik'asa matihanina sy tsy miankina. Manaraka fitsipika henjana henjana izy ireo, saingy mbola tsy mahatratra ny marika akory ny asany.
Ahoana ny fijerena sy hisorohana ny fanafihana botnet Io Io?
Azonao atao ny mamantatra sy misoroka ny fanafihan'ny IoT amin'ny alàlan'ny hifikitra amin'ireto fomba manaraka ireto, izay nomen'i Igor Gamanenko, Semalt Mpitantana Success Success:
Fomba №1: Fehezan-tsakafo fototra:
Izao no fotoana tokony hieritreretanao tsara momba ny fisamborana sy fisorohana ny fanafihana botnet Io Io. Tsy ampy ny fepetra henjana momba ny cybercurity, izay midika fa mila mieritreritra zavatra hafa ianao fa tsy ny teknika nentim-paharazana..
Fomba 2: Fahaizana mivezivezy sy mavitrika:
Misy rafitra samihafa mandalo sy mavitrika amin'ny fanandramana ny botnets sy ny fanafihan'ny IoT. Ny fomba tsara indrindra fitadiavana botnet dia mifototra amin'ny fanombanana sy ny fandalinana ny fifamoivoizana eo amin'ny botmaster sy ny bots.
Fomba №3: Ny tolotra HTTP:
Ny botnets izay miankina amin'ny tolotra HTTP momba ny asany sy ny fifandraisana dia sarotra ny mamantatra. Izany dia satria ny fifandraisana misy eo amin'ny botmeter sy ny bots dia ao anaty format malalaka.
Fomba №4: ezaka iombonana
Mba hisorohana ny fanafihana botnet, dia tokony hiantoka ny ezaka iombonana ataon'ny orinasa, ny manam-pahaizana momba ny fiarovana, ny orinasa, ny mpizara domain, ny rejisim-bokim-panjakana, ny mpanome tolotra amin'ny rahona, ary ny orinasa mpampihatra lalàna iraisam-pirenena.
Fomba №5: Teknolojia notendrena ary nanafina ny fanafihana botnet:
Ny ezaka mitongilana sy iombonana dia mila manavaka, manaisotra, mampahafantatra ary manoloana ny fanafihana botnet dia misoroka tranonkala sy bilaogy mampiahiahy. Ny fahatsiarovan-tena momba ireo botnets Io sy ny cybercurity dia ny ilainao mba ho tafavoaka velona an-tserasera. Ankoatra izany, tokony hahafantatra ny loza ateraky ny risika sy ny loza mety hitranga ianao mba hahafahanao manampy ireo mpampiasa hafa koa. Tokony hahafantatra sy hiaro ny loza ateraky ny fanaraha-maso ny manamboninahitra mpiaro ny cyber ianao. Ny fiarovana no hany fomba ahafahanao mamantatra ny fanafihana botnet IoT ary mety hisakana azy ireo amin'ny ankapobeny.
Tokony hotadidinao foana fa mandritra ny botnet sy ny IoT, ny solosainao dia tratran'ny viriosy manaparitaka spam ary mandefa mailaka phishing amin'ny mpampiasa. Izy io dia mikendry ny hamandrika ny mpampiasa mba hanindry ireo rohy mampiahiahy ary maka ny rakitra hafahafa Source .